စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်း အလုပ်နဲ့. . ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ် ရှာပြီး. .ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ရှာမှရှားတဲ့ သမ္မတသား. . . - Myanmar People Alliance
စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်း အလုပ်နဲ့. . ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ် ရှာပြီး. .ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ရှာမှရှားတဲ့ သမ္မတသား. . .
အင်ဒိုနီရှား သမ္မတဂျိုကိုဝီ ဝီဒိုဒိုရဲ့သား အငယ်ဟာ ဒီနေ့ စင်ကာပူ လူမှုရေးသိပ္ပံ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ယူပါတယ်။ ဒီ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို သမ္မတဂျိုကိုဝီ ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ပါတယ်။ ဒါလောက်နဲ့ ဖောက်သည်ချစရာ သတင်းမဟုတ်ပါ။
သမ္မတ ဂျိုကိုဝီမောင်နှံဟာ ဒီသားကျောင်းတက်စဉ်ကလည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ဖူးရာမှာ မိသားစုကိစ္စသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် အဆောင်အယောင် ဘာမှမသုံး အရပ်ဘက် လေယာဉ်နဲ့ အသံတိတ်လိုက်လာလို့ စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးက မျက်ကလဲဆန်ပြာ အကြိုထောက်ပြီး ဧည့်ခံရဖူးတယ် ။
ဒီအဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူ သတိကြီးထားတဲ့ စလုံး အစိုးရဟာ ဒီနေ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို သမ္မတ ဟာလီမာ ကိုယ်တိုင် ဘွဲ့နှင်းအပ်ဖို့ စီစဉ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးယီကွန်း က အမှာစကား ပြောပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတယ် ။
သမ္မတကြီး က ဒီလို humble ဖြစ်အောင် နိဝါတ မင်္ဂလာပြုရုံထက် ပိုတဲ့ စိတ်ဘဝင်ခွေ့ စရာကတော့ သမ္မတကြီးရဲ့သားဟာ ကျောင်းတက်ရင်း အချိန်ပိုင်းစားသောက်ဆိုင် ကက်ရှာ(ငွေသိမ်းငွေရှင်း ဝန်ထမ်း) အလုပ်လုပ်ရင်း မိဘနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် စံပြု ပြခဲ့တယ် ဆိုတာပဲ ။ ခဏတဖြုတ် ဟန်ပြ မဟုတ် ၊ သုံးနှစ်ဗျ။
နိုင်ငံ့ မြို့တော် ကို ဂျကာတာ ကနေ နေရာပြောင်းရွှေ့ ဖို့ မာစတာပလန် စီမံကိန်းကြီး ကြောင့်. ကြိုက်သူ မကြိုက်သူ ဝိဝါဒါ ကွဲနေတဲ့ အင်ဒိုပြည်သူများကြားမှာ. .
ကားကြပ်ရင် လမ်းဆင်းလျှောက်ပြီး သားကို ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် ကျောင်းတက်စေတဲ့ သမ္မတဂျိုကိုဝီ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တိုင်ကိုလည်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီမို့. ဒီ ပီအာမျိုးနဲ့ စန်းပွင့်သထက် ပွင့်နေဦးမယ် ထင်ပါတယ် ။
ဘရာဗို အင်ဒို ။
စားသောကျဆိုငျဝနျထမျး အလုပျနဲ့. . ကိုယျ့စရိတျကိုယျ ရှာပွီး. .ကြောငျးတကျခဲ့တဲ့ ရှာမှရှားတဲ့ သမ်မတသား. . .
အငျဒိုနီရှား သမ်မတဂြိုကိုဝီ ဝီဒိုဒိုရဲ့သား အငယျဟာ ဒီနေ့ စငျကာပူ လူမှုရေးသိပ်ပံ တက်ကသိုလျကနေ ဘှဲ့ယူပါတယျ။ ဒီ ဘှဲ့နှငျးသဘငျကို သမ်မတဂြိုကိုဝီ ကိုယျတိုငျလညျး တကျပါတယျ။ ဒါလောကျနဲ့ ဖောကျသညျခစြရာ သတငျးမဟုတျပါ။
သမ်မတ ဂြိုကိုဝီမောငျနှံဟာ ဒီသားကြောငျးတကျစဉျကလညျး လိုကျပါပို့ဆောငျခဲ့ဖူးရာမှာ မိသားစုကိစ်စသာ ဖွဈတဲ့အတှကျ နိုငျငံတျော အဆောငျအယောငျ ဘာမှမသုံး အရပျဘကျ လယောဉျနဲ့ အသံတိတျလိုကျလာလို့ စငျကာပူ နိုငျငံခွားရေးက မကျြကလဲဆနျပွာ အကွိုထောကျပွီး ဧညျ့ခံရဖူးတယျ ။
ဒီအဖွဈကို သငျခနျးစာယူ သတိကွီးထားတဲ့ စလုံး အစိုးရဟာ ဒီနေ့ ဘှဲ့နှငျးသဘငျကို သမ်မတ ဟာလီမာ ကိုယျတိုငျ ဘှဲ့နှငျးအပျဖို့ စီစဉျပွီး ပညာရေးဝနျကွီးယီကှနျး က အမှာစကား ပွောပေးဖို့ စီစဉျခဲ့ကွတယျ ။
သမ်မတကွီး က ဒီလို humble ဖွဈအောငျ နိဝါတ မင်ျဂလာပွုရုံထကျ ပိုတဲ့ စိတျဘဝငျခှေ့ စရာကတော့ သမ်မတကွီးရဲ့သားဟာ ကြောငျးတကျရငျး အခြိနျပိုငျးစားသောကျဆိုငျ ကကျရှာ(ငှသေိမျးငှရှေငျး ဝနျထမျး) အလုပျလုပျရငျး မိဘနဲ့ တိုငျးပွညျအတှကျ စံပွု ပွခဲ့တယျ ဆိုတာပဲ ။ ခဏတဖွုတျ ဟနျပွ မဟုတျ ၊ သုံးနှဈဗြ။
နိုငျငံ့ မွို့တျော ကို ဂကြာတာ ကနေ နရောပွောငျးရှေ့ ဖို့ မာစတာပလနျ စီမံကိနျးကွီး ကွောငျ့. ကွိုကျသူ မကွိုကျသူ ဝိဝါဒါ ကှဲနတေဲ့ အငျဒိုပွညျသူမြားကွားမှာ. .
ကားကွပျရငျ လမျးဆငျးလြှောကျပွီး သားကို ကိုယျ့စားရိတျနဲ့ကိုယျ ကြောငျးတကျစတေဲ့ သမ်မတဂြိုကိုဝီ ဟာ ရှေးကောကျပှဲ မှတျတိုငျကိုလညျး ကြျောဖွတျခဲ့ပွီမို့. ဒီ ပီအာမြိုးနဲ့ စနျးပှငျ့သထကျ ပှငျ့နဦေးမယျ ထငျပါတယျ ။